Omar waxa uu Sweden ku lisaa lo’da - iftineducation.com
iftineducation.com – Wiilka lagu magacaabo Omar Mohamud Ahmed waxa uu Sweden soo galay labo sano ka hor, isagoo ka yimid tuulada Bulegaduud ee koonfurta Somalia, halkaasi oo kuu ku dhaqi jiray ariga. Markii uu Sweden soo galay ayuu Omar sheegtay in uu yaqaano sida xoolaha loo xanaaneeyo isagoo dalbaday in praktik looga raadiyo goobaha xoolaha lagu dhaqo.
Omar oo hadda ku nool magaalada Härnösand, ayaa praktik ka galay xero ay leeyihiin reer Swedish ah oo lagu magacaabo Dan iyo Birgitta Öman. Halkaasi uu lo’da ku liso. Reerkaan ayaa sheegay in ay aad ula dheceen shaqada Omar isagoo ay ku tilmaameen mid hawl-kar ah oo ay la yaabeen qaabka uu u shaqeeynayo.
“Waxaa la i tusay sida shaqada loo qabto ka dibna waan shaqo bilaabay” ayuu ku yiri telefishinka SVT.
Waxa uu intaasi ku daray in uu shaqadiisa aad ugu qanacsanyahay isla markaana uu jecelyahay reerka uu u shaqeeyo. Mustaqbalka ayuu doonayaa in uu yeesho goob xoolaha lagu xanaaneeyo.
Omar ayaa sidoo kale qaabilsan nadaafada xoolaha. Sida uu Omar shaqada ku helay ayaa muujinaysa muhiimada ay leedahay in uu qofku sheegto waxa uu yaqaano, xitaa haddii ay tahay sida xoolaha loo dhaqo. Iyo muhiimada ay leedahay shaqada xitaa haddii ay tahay mid dadku ka faanaan.
AMISOM oo sheegtay inay ka guureyso garoonka Muqdisho